UJuan Sin Tierra. Ukufunda ngomntakwabo Ricardo Corazón de León | Uncwadi lwangoku
UKumkani uJohn I waseNgilani, UJuan Sin Tierra yezeMbali, ityikitywe umhla onje namhlanje 1245 la UMagna Carta, isiseko senkululeko yomgaqo-siseko wexesha elizayo eYurophu. Ubhuti omncinci, kunye hayi kangako ngobubi, de URichard the Lionheart Ungomnye wabo bantu bembali, abafana nomntakwabo odume ngokugqwesa ubomi bakhe. Inkqubo ye- cinema kunye noncwadi banegalelo koku ngendlela ebalulekileyo. Ndiyaqaqambisa 4 ukufundwa malunga naye ukusukela oko Iindlela ezahlukeneyo.
1 UJuan Sin Tierra
2 Eleanor weAquitaine - uPamela Kaufman
3 U-Ivanhoe - uWalter Scott
4 Ukuchasa uKumkani-uElizabeth Chadwick
5 URobin wehlathi - uJosé Luis Garci
UJuan Sin Tierra
Xa uyihlo UHenry II, Ekuqaleni UKumkani waseNgilani weNdlu uPlantagenet, ekuthiya igama elithi "Awunamhlaba" xa uneminyaka emibini ubudala, kufuneka sele ukhathazekile. Kwaye kwenzeka oko koyena mncinci kubantwana baka-Enrique no-Eleanor wase-Aquitaine. Kuba nangona ekugqibeleni wazizuz 'ilifa izinto Koko kubizwa ngokuba yi-Angevin Empire (Umhlaba kayise owafunyanwa ziimfazwe kunye nomtshato wakhe no-Eleanor, oyena mfazi usisityebi wexesha lakhe), akazange akwazi ukubalondoloza.
Nangona kunjalo, uJuan sin Tierra wayengukumkani ebaluleke kakhulu kunomntakwabo odumileyo uRicardo Corazón de Léon. Ulawule iminyaka engaphezulu kwaye ngokuzinikela ngakumbi kwimicimbi yesiNgesi kunoRicardo, osweleke engenamcimbi. Ngaphezu koko, bonke ookumkani kwada kwaphantse kwaba ngamakhulu amathathu eminyaka kamva beyinzala yakhe.
Eleanor ka-Aquitaine -UPamela Kaufman
Eleanor ka-Aquitaine wayenjalo omnye wabafazi abanomdla kwi IYurophu yamandulo. Wazalelwa ngaphakathi 1112, kwaye wayetshatile okokuqala iminyaka eli-10 yesaqhwithi kukumkani wase-France ULouis VII, owamthabatha wamsa kwiNkqubela yesiBini. Amava ammakisile kwaye wayefuna ukufumana ukurhoxiswa yomtshato.
Wazama ukutshata emva kothando oluncinci, kodwa wanyanzelwa ukuba atshate nokumkani UHenry II. Ukwamkela imeko, wagqiba lwela amalungelo akho kunye nalawo abantwana bakho kude kube sekupheleni kobomi bakhe obude kunye nobomelele kakhulu. Yonke le nto yile noveli iphumeleleyo ngumbhali waseMelika.
Ivanhoe -UWalter Scott
Ii-Avatars zoMhlekazi oBalaseleyo UWilfredo waseIvanhoe Emva kokubuya kwakhe kwiiMfazwe Zomnqamlezo, iingxaki notata wakhe kunye nobutshaba phakathi kwamaNorman kunye namaSaxons yimpikiswano yoku iiklasikhi zeklasikhi yombhali waseScotland. Ikwalibali lokuqala apho umlinganiswa odumileyo evela khona Robin Hood, zazo iinguqulelo ezininzi zenziwe kwaye zihlala zikhona wenza mnyama umfanekiso kaJuan Sin Tierra.
Delela ukumkani -U-Elizabeth Chadwick
U-Elizabeth Chadwick uthathelwe ingqalelo umbhali obalaseleyo weentsomi zamandulo. Kwaye le noveli iyahambelana nemigaqo ye inkcazo ebukhali kunye neenkcukacha ezinkulu zeenkcazo kunye nabalinganiswa eziphawula uhlobo olo.
Nge imvelaphi de la UMagna Carta, ubalisa ibali lika UMahelt Marshal, intombi elungeleleneyo yamadoda anamandla eNgilane, obomi babo butshintsha kakhulu xa inkosi iqala ukungathembi utata wakhe ngokungcatsha umbuso. Xa abantakwabo bebanjiwe bethathwa njengabathinjwa, uMahelt uyatshata UHugh Bigod, Indlalifa yeNorfolk County.
Kuya kuba nzima ukulungelelanisa nobomi bakho obutsha Namasiko abantu basebukhweni bakhe. Nangona kunjalo, baphela bethandana ngokunzulu. Kodwa emva koko uKumkani uJohn ugqiba kwelokuba oyise iBigod, kwaye uMahelt uza kujongana nengxaki yokuba yena nomtshato wakhe abayi kusinda emfazweni.
URobin wehlathi -UJose Luis Garci
Le yayiyi irhafu ukusuka kuGarci ukuya kwi uninzi lwefilimu edumileyo kunye noRobin Hood odumileyo: umlawuli UMichael Curtiznge U-Errol Flynn kunye no-Olivia de Havilland njengabalinganiswa abaphambili. Wayipapasha Isikhumbuzo seminyaka engama-80 sokuqala kwayo eyayikho ngo-2018 zi khankanya Ukusuka ekusebenzeni okungalindelekanga kotyani okuthintele umntwana uGarci ekubeni aye kwi-premiere yefilimu.
Le nguqulo ikhunjulwayo inokubonisa ubuso obubonakalayo kubo bonke abo banike ubomi kwiintsomi kuJuan Sin Tierra: lowo womdlali obalaseleyo wesiNgesi owayekhona Imvula kaClaude, Uxabiseke kakhulu kumfanekiso wakhe Ubumnyama, ubuqhetseba, ukuthandabuza kwaye kwangaxeshanye kuyahlekisa wokumkani wasekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » UJuan Sin Tierra. Ukufunda ngomntakwabo Ricardo Corazón de León